Indoda ecebe kakhulu eAfrika ishiye obeyintombi yakhe engenakhaya | Scrolla Izindaba
Indoda ecebe kakhulu eAfrika ishiye obeyintombi yakhe engenakhaya
Yize eyintombi kaAliko Dangote, indoda ecebe kakhulu eAfrika, uAutumn Spikes kuthiwa waxoshwa eflethini lakhe ngemuva kokuba imali ingakhokhwa ngesikhathi lezi zithandani zisathandana.
Kuyisimo esenzeke kamuva kulezi zithandani eziphakeme.
Iphephandaba i-The Premium Times libike ngoLwesithathu ukuthi uNkk Spikes, odabuka eMelika, unesikweletu semali yerenti engu- $ 13,230 (izinkulungwane ezingama-R 200,000) engxenyeni yonyaka wezi-2020 efulethini lakhe elise-Florida – ngesikhathi yena nosozigidi wase-Nigeria kusabikwa ukuthi bayathandana.
Lezi zithandani zihlukane ngemuva nje kokuba uSpike efake isithombe ezinkundleni zokuxhumana sikaDangote elele embhedeni. Ubonakala esongwe ngengubo ewolintshi lapho kubonakala ingxenye eyodwa kuphela yomzimba wakhe: isingezansi sakhe engagqokile.
Lezi zithandani zisanda kuba sematheni ngemuva kokuthi uDangote esole uSpikes ngokuzama ukumqola imali engu- $ 5m (izigidi ezingama-R 75) ngokungemthetho.
Kubikwa ukuthi wamcela ukuthi asayine iSivumelwano Sokungadaluli mayelana nobudlelwane babo beminyaka eyishumi, wavuma kodwa ngemali encane nje engu- $ 5m.
Kepha ngesikhathi bobabili besasemathandweni lwabo oluvutha amalangabi, uNkk Spikes ubebhekene nenkinga yokukweleta kwemali yezinyanga kaNdasa kuya kuNcwaba kowe-2020.
Umnikazi wendawo esogwini lolwandle eNyakatho ne-Miami, e-Florida, unikeze uNkk Spikes isaziso sezinsuku ezingama-30 esithi ‘Khokha noma uphume’ mhla zi-5 kuNcwaba.
UNkk Spikes akazange ayikhokhe irenti noma ashiye leli fulethi.
Ngenxa yalokho, umnikazi wendlu wafaka icala lokumxosha enkantolo yase-Miami Dade County, okuyinkantolo efanayo lapho uMnu uDangote asazommangalela khona ngoMasingana.
Kwi-Instagram post, uNkk Spikes wathi wenqabe u- $ 15,000 (izinkulungwane ezingama-R225,000) “ngokwedelela” azinikezwe nguDangote ngokusayina kwakhe i-NDA.
Umthombo wevidiyo: @Inside_Life_Ng